I-Powder Metallurgy, i-Bushing Bearing, amaGiya - i-Welfine
Ifektri yasekuqaleni ye-JIANDE SINFINE POWDER METALLURGY. Kutholakale edolobheni laseHangZhou Jiande elithuthukisiwe, elisungulwe ngo-2001, iWinfine inendawo yokuzakhela eyakhiwe eyizinkulungwane ezingama-5000 metres, amandla okukhiqiza wonyaka wamathani ayi-500.
blackening noma black enamathela metallurgy machiner ...
Izinsizakalo zobuchwepheshe, ukuthuthukiswa kwezobuchwepheshe, ukubonisana kwezobuchwepheshe, ukushintshaniswa kwezobuchwepheshe, ukudluliswa kobuchwepheshe kanye nokwenziwa kobuchwepheshe; Ukukhiqizwa kwamabhere, amagiya nezingxenye zokudlulisa; Ukuthengiswa kwamabhere, amagiya nezinto zokuhambisa ...
Yakha Umshini Wakho Wokubumba
Ukulungele ukudala isigayo sakho esisha esime mpo se-Haas?
Masithole umshini ofanele wesitolo sakho, bese usenza owakho ngokungeza izinketho nezici ezikusebenzelayo.